TSY MANDEHA NY PC-RADIO: NY ANTONY SY NY VAHAOLANA - AHOANA NO HANAOVANA - 2019
Tena Ahoana no hanaovana
Nahoana no tsy miasa ny PC-Radio? Ny antony lehibe sy ny vahaolana
PC Radio - Fandaharam-potoana tsara ho an'ny fihainoana horonam-peo an-tserasera amin'ny solosaina manokana. Ao amin'ny lalao dia misy onjam-peo maro an-toerana sy vahiny, sehatra misy boky, vaovao ary dokam-barotra - ny mpisera tsirairay dia afaka mifidy ny mozika tiany. Na izany aza, ny fahatsapana dia afaka manimba ny fiverimberenan'ny fikirakirana mahazatra ny fandaharana.
Afeno ny version farany amin'ny PC-Radio
Ny olana lehibe indrindra. izay mety hipoitra:
- ny feo dia mihitsoka na mitoloko
- Ny onjam-peo tsy miankina dia tsy miasa
- Ny interface interface dia mampitony ary tsy mamaly ny fanindriana
Na dia kely ihany aza ny lisitra, dia mety hisy antony maromaro ireo olana ireo. Ity lahatsoratra ity dia handinika ny vahaolana rehetra momba ny olana.
Tsy misy feo ao amin'ny PC-Radio
Ny olana mahazatra indrindra amin'ny fandaharan'asam-pahaizana manokana amin'ny filalaovana mozika dia ny tsy fisian'ny feo. Inona no antony mahatonga ny feo tsy ho avy amin'ny fandaharana?
- Ny zavatra voalohany tokony hatao Fifandraisana amin'ny Internet. Tena mahazatra izany, nefa maro ireo mpampiasa no tsy mahatsikaritra fa amin'ny fotoana filalaovan'ny onjam-peo dia tsy manana Internet izy ireo. Ampifandraiso amin'ny modem na misafidiana teboka Wi-Fi - ary aorian'ny fifandraisana amin'ny tambajotra, dia manomboka ny play.
- Efa eo amin'ny sehatry ny fametrahana ny programa dia mety ho tratran'ny fahitana Firewall. Ny fiarovana ny HIPPS dia mety miasa (ny fametrahana dia mitaky ny fananganana tahiry vonjimaika, izay mety tsy hampifaly ny firewall amin'ny fampiasana mpampiasa na fomba amam-panao mahery fihetsika). Miankina amin'ny fiarovana ny fiarovana, ny PC-Radio dia mety ho voasakana ao ambadiky ny fidirana amin'ny tambajotra, ny soritr'aretina dia mitovy amin'ny ao amin'ny fehintsoratra etsy ambony. Raha ny tsara indrindra, raha toa ka manondro ny fifandraisana amin'ny mpampiasa ny fikandrana ny firewall rehefa ahitan'ny programa ny fifandraisana misy eo amin'ny tambazotra, dia hisy fikandrana iray amin'ny pop-up izay mandefa ny mpampiasa ny fomba hiatrehana ilay program. Raha toa ny fomba fiasa mandeha amin'ny rindrankajy, dia hotontosaina tsy misy fahaleovan-tena ny fitsipika - matetika indrindra amin'ny fampifandraisana ny programa amin'ny Internet. Mba hialana amin'ny fidirana dia mandehana any amin'ny sehatry ny fiarovana ary mametra fitsipika mahazatra ho an'ny rakitra executable PC-Radio.
- Miverimberina matetika ny olana amin'ny radio. Tsy mahazatra ny olana ara-teknika, ka raha Radio tsy miankina iray dia tsy milalao, ary ny sisa dia tsy misy olana - tsara ny miandry fotoana iray (hatramin'ny 5 minitra ka hatramin'ny iray na mihoatra, arakaraka ny baikon'ny horonam-peo) rehefa haverina amin'ny laoniny ny fampielezam-peo.
- raha ilaina Nanjavona tao amin'ny lisitra ankapobeny ny onjam-peo, misy safidy maromaro: na ny tranga voalaza etsy ambony, ary mila miandry fotsiny ianao, na manandrana manavao ny lisitry ny onjam-peo amin'ny tanana (amin'ny fampiasana bokotra manokana) na ny famerenana ny programa (manidy azy ary manokatra izany indray).
- ary misy onjam-peo tsy maintsy ilaina, ary ao ny Internet, ary nahitana namana iray mpandefa radio - ny feo dia mbola mihozongozona? Ny olana mahazatra indrindra dia ny haingam-pandeha ambany ambany. Hamarino ny kalitaon'ny serivisy omen'ny mpamatsy azy, atsangano ny modem, mandehana ny programa momba ny background - raha toa ka tsy miasa amin'ny alàlan'ny fampidinana ny sarimihetsika tianao indrindra ny torrent, mety misy olona mifandray amin'ny Internet anao ary manisy zavatra hafa ihany koa. Ao amin'ny dikan-teny karama, azonao atao ny mampihena ny kalitaon'ny horonam-peo, ary ny fandaharam-potoana dia tsy mitaky haingana amin'ny haavo. Na dia matanjaka aza ny aterineto ary tsy ilaina amin'ny famerenana ara-dalàna, ny zavatra tena lehibe dia fifandraisana tsy miovaova.
- Ny mari-pahaizana momba ny programa Windows dia toy izany ka noho ny antony tsy fantatra dia mety hihantona sy hijanona izy ireo. Izany koa dia mihatra amin'ny PC-Radio - 100% tratran'ny processeur sy RAM, ny vokatr'ireo fandaharana ratsy dia mety hisy fiantraikany amin'ny asa. Manandrama fandaharana tsy ilaina, farito ireo paikady izay tsy ilaina amin'ny fotoana, ampitaho ny Antivirus ary jereo ny disques amin'ny programa sy ny dingan-doza. Amin'ny tranga faratampony, manolo-kevitra ny hanaisotra tanteraka ny programa amin'ny sehatra manokana tahaka ny Revo Uninstaller sy ny famerenana azy indray. Mitandrema, ny fametrahana ny programa miaraka amin'ny famafana tanteraka dia tsy ho voavonjy!
Ny fikarakarana tsy mivaingana amin'ny fampiharana dia azo jerena ao amin'ny dikan-teny beta ao amin'ny programa, miandry ny famoahana ny dikan-teny maimaim-poana na hametrahana ny version farany.
- amin'ny fisehoan-javatra olana amin'ny famandrihana nomerika dia tokony hifandray mivantana avy hatrany amin'ny serivisy mpanohana ny mpandrindrana ofisialy, saingy afaka mamaha ireo olana rehetra ireo izy ireo, mitondra ny andraikitra feno amin'ny vola aloa.
- ao amin'ny dikan-teny maimaimpoana Ny asa sasany dia tsy miasa toy ny famantaranandro sy ny fandaharam-potoana, mba hahafahan'izy ireo miasa, mila mividy famandrihana ianao. Aza adino fotsiny amin'ny fanontaniana tranonkala ofisialy!
Ho famaranana - ny olana lehibe amin'ny asan'ny fandaharana dia avy amin'ny tsy fisian'ny fifandraisana amin'ny aterineto na tsy azo ovaina, indraindray koa ireo lohan'ny horonam-peo no diso. Ampiasao ny dikan-teny maoderina amin'ny fampiharana, mametraka firewall ary mampifandray Internet maimai-poana - ary ny PC-Radio dia azo antoka fa hahafinaritra ny mpihaino amin'ny mozika tsara.
https://termotools.com mg.termotools.com © Ahoana no hanaovana 2019